သံမီးကြွေမီးဖိုချောင်သုံးစက်ရုံ - တရုတ်သွပ်မီးကြွေမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
၁။ ပေါ့ပါးသောကြွေအချောသပ်ဖြင့်ပေါ့ပါးပြီးချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအစွန်းအထင်းမရှိသောအဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ အနက်ရောင်ကြွေကြွေအတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။
၃။ ထူသောအခြေသည်အပူဖြန့်ဝေခြင်းကို ပို၍ ပင်ဖန်တီးသည်။
4. Tiered အဖုံးဒီဇိုင်းသည်အရသာရှိသောစိုစွတ်သောအစားအစာအတွက်အတွင်းပိုင်းရေငုပ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: JT B29, JT B34： ပစ္စည်း - သံသတ္တုကြွေထည်အရွယ်အစား - ၃၀ * ၂၃ * ၃၃.၅ * ၂၅.၅ * ၁၃.၃ ထုပ်ပိုးခြင်း - သေတ္တာ ၁။ ပိုမိုပေါ့ပါးသောကြွေထည်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ 2. ခြစ်ရာဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အစွန်းအထင်းခံနိုင်စွမ်းမရှိသောအဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ အနက်ရောင်ကြွေအတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်။ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက်ထောင့်ကျယ်အကျယ်အ ၀ န်းပါသောလက်ကိုင် ၃ လက်မ။ 4. ပိုမိုထူထပ်သောအခြေခံသည်အပူဖြန့်ဝေခြင်းကို ပို၍ ပင်ပြုလုပ်သည်။ အဖုံးဒီဇိုင်းသည်အရသာရှိသောစိုစွတ်သောအစားအစာအတွက်အတွင်းပိုင်းရေငုပ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: JT B29, JT B34： ပစ္စည်း - သံသတ္တုကြွေထည်အရွယ်အစား - ၃၀ * ၂၃ * ၃၃.၅ * ၂၅.၅ * ၁၃.၃ ထုပ်ပိုးခြင်း - သေတ္တာ ၁။ လီတာသည်ကြွေထည်ဖြင့်ပြီးသောချက်ပြုတ်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ 2. ခြစ်ရာဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အစွန်းအထင်းခံနိုင်စွမ်းမရှိသောအဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ အနက်ရောင်ကြွေအတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်။ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက်ထောင့်ကျယ်အကျယ်အ ၀ န်းပါသောလက်ကိုင် ၃ လက်မ။ 4. ပိုမိုထူထပ်သောအခြေခံသည်အပူဖြန့်ဝေခြင်းကို ပို၍ ပင်ပြုလုပ်သည်။ အဖုံးဒီဇိုင်းသည်အရသာရှိသောစိုစွတ်သောအစားအစာအတွက်အတွင်းပိုင်းရေငုပ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: JT B29, JTB34： ပစ္စည်း - သံသတ္တုကြွေထည်အရွယ်အစား - ၃၀ * ၂၃ * ၃၃.၅ * ၂၅.၅ * ၁၃.၃ ထုပ်ပိုးခြင်း - သေတ္တာ ၁။ လီတာသည်ကြွေထည်ဖြင့်ချက်ပြီးအမှုန့်အတွက်ပါ ၀ င်သည်။ 2. ခြစ်ရာဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အစွန်းအထင်းခံနိုင်စွမ်းမရှိသောအဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ အနက်ရောင်ကြွေအတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်။ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက်ထောင့်ကျယ်အကျယ်အ ၀ န်းပါသောလက်ကိုင် ၃ လက်မ။ 4. ပိုမိုထူထပ်သောအခြေခံသည်အပူဖြန့်ဝေခြင်းကို ပို၍ ပင်ပြုလုပ်သည်။ အဖုံးဒီဇိုင်းသည်အရသာရှိသောစိုစွတ်သောအစားအစာအတွက်အတွင်းပိုင်းရေငုပ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။